“Martial wuxuu u baahan yahay kalsooni kaddib bixitaankii Jose Mourinho” – Rio Ferdinand – Gool FM
“Martial wuxuu u baahan yahay kalsooni kaddib bixitaankii Jose Mourinho” – Rio Ferdinand
Dajiye July 18, 2020
(Manchester) 18 Luulyo 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa xaqiijiyay in Anthony Martial uu u baahnaa kalsooni kaddib bixitaankii Jose Mourinho.
Qaab ciyaareedka Anthony Martial ayaa hoos u dhacay mudadii uu Jose Mourinho joogay kooxda Manchester United, balse ciyaaryahanka ayaa dib u soo ceshaday awoodiisa ciyaareed tan iyo markii uu Jose ka tagay Red Devils bishii Diseembar 2018.
Haddaba shabakada caalamiga ah ee “Goal” ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay Rio Ferdinand waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan u maleynayaa sida ay aniga ahaan ila tahay inuu Martial u baahnaa in dib loo dhiso”.
“Jose wuxuu keenay Zlatan Ibrahimovic, wuxuuna qaatay lambarkii uu sitay Anthony Martial ee 9-aad, muxuu ku sameeyay kalsoonida ciyaaryahanka? Kuuma sheegi karo, waa arrin aad ku lumin karto kalsoonidaada gebi ahaanba”.
“Waa ciyaaryahan ku wanaagsan xerada ganaaxa isla markaana goolal dhaliya, sida bahalnimada leh uu ciyaarayo iyo xirfada uu leeyahay, tani waa waxa aan ku jeclahay isaga, wuxuu sameeyaa wax walba oo aad ka dooneyso gooldhaliyaha lambarka 9-aad”.
“Marka loo fiiriyo sida aad ugu raaxeysanayo heerkaada ka ciyaaryahan ahaan, waxaad u baahantahay, taageerida iyo kalsoonida macalinkaada, si aad u soo bandhigto wax walba ee aad awoodo”.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo si adag uga jawaab celiyey weerarkii ay kooxda Man United ku qaadeen Jose Mourinho & Frank Lampard